ကလေးတွေကို မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးခြင်းက ဘာ့ကြောင့်အရေးပါတာလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Family ကလေးတွေကို မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးခြင်းက ဘာ့ကြောင့်အရေးပါတာလဲ?
ကလေးတွေကို မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးခြင်းက ဘာ့ကြောင့်အရေးပါတာလဲ?
တချို့မိဘတွေအတွက်တော့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ နီးလာတဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားကြပါတယ်၊ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးကို မွေးနေ့ပွဲကျင်းပပေးဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ သို့သော် မွေးနေ့ပွဲ လုပ်တာ ပိုက်ဆံကုန်တယ်၊ ပင်ပန်းတယ်၊ မလုပ်လည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ မိဘတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယနေ့မှာ ကလေးတွေရဲ့ ပျော်ရွင်တဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို မျက်ခြည်မပြတ် အားပေးပြီး ကလေးငယ်တွေကို မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပေးခြင်းရဲ့ အရေးပါပုံကို မျှဝေပေးလိုပါတယ်။
စိတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရဲ့ အဆိုအရ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပခြင်းရဲ့ အားသာချက်များ
သူတို့ရဲ့ self-esteem ကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်- ကလေးတစ်ဦးဟာ ဂုဏ်ပြုခံရတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အခါ မိသားစုဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်း ခံစားရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မွေးနေ့က သူတို့မိဘတွေရဲ့ ဘဝမှာ အရေးပါဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။
မိသားစုနှောင်ကြိုးကို ခိုင်မြဲစေပါတယ်- မိသားစု အစဉ်အလာရှိခြင်းက အပြုသဘောဆောင်ပါတယ်။ မွေးနေ့ပွဲလေးက ခမ်းနားသည်ဖြစ်စေ၊ မခမ်းနားသည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ခုကို အတူတူကျင်းပရတယ်ဆိုရင်ပဲ အဓိပ္ပာယ်ရှိနေပါပြီ။
သူတို့ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးကို တိုးတတ်စေပါတယ် – သူငယ်ချင်းတွေ၊ အဘိုးအဘွားတွေ (သို့) ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို မွေးနေ့ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်းက ကလေးအား အပေါင်းအသင်း တွေနဲ့ ပေါင်းတတ်သင်းတတ်ပြီး ကြင်နာမှုဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကောင်းကို ရရှိစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ အမှတ်တရများကို ဖန်တီးပေးပါတယ်- မူကြိုမှတ်ဉာဏ်ကို လေ့လာတဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ ကလေးဘဝအမှတ်တရအများစုဟာ အာရုံခံစားမှု၊ အနံ့နှင့် တေးဂီတစတဲ့ ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှ စုဆောင်းရရှိသော အချက်အလက်များစွာမှ ဖန်တီးထားတဲ့ မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မွေးနေ့ပွဲကျင်းပခြင်းမှ အမှတ်တရဖန်တီးခြင်းဟာ တကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ကြီးပြင်းမှုကို သတိထားမိစေပါတယ် – ကလေးတွေဟာ တစ်ခြားသူတွေ မပြောရင် သူတို့ရဲ့ ကြီးပြင်းမှုကို သတိမပြုမိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မွေးနေ့တွေဟာ သူတို့အရွယ်ရောက်လာခြင််း ဖြစ်စဉ်ကို ရှာဖွေဖို့ အလွန်ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
အချို့မိဘတွေအတွက်တော့ ကလေးမွေးနေ့ကျင်းပဖို့က ဖိအားပေးခံရသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ တစ်နှစ်မှ တစ်ခါသာ ကျင်းပရတာဖြစ်ပြီး မွေးနေ့ပွဲက ကလေးတွေကို ပိုပြီး Motivated ဖြစ်စေသလို စိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။ ဖယောင်းတိုင်မှုတ်ပြီး ကိတ်မုန့်စားတာကလည်း သူ့အတွက် အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကလေးအတွက် မွေးနေ့ပွဲဆိုတာ စျေးအကြီးဆုံး မွေးနေ့ကိတ်မုန့်၊ စတိုးဆိုင်က စျေးအကြီးဆုံး လက်ဆောင်ရမှမဟုတ်ဘဲ ကလေးရဲ့ ခံစားချက်ပါဝင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ နွေးထွေးမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် လေးစားမှုတို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleအမွှာပူးလေးတွေ ရဖို့လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အချက် ၇ ချက်
Next articleဗီတာမင်ဖြည့်စွတ်ဆေးများဟာ တကယ်ဘဲ အကျိုးရှိပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကင်းတယ်ဆိုတာ သေချာရဲ့လား